डम्बर खतिवडा, नेता– नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखकको छवि बनाएका डम्बर खतिवडा डेढ वर्षदेखि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालसँग आवद्ध छन् । लामो समयदेखि वैकल्पिक राजनीतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उनी कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेता हुन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि खतिवडासँग साझापोस्टले निर्वाचन परिणामको विश्लेषण, नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य र वैकल्पिक शक्तिबीच सहकार्य र संघर्षको सम्भावनामा केन्द्रित भएर कुरा गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
तामझामसहित सुरु भएको नयाँ शक्ति निर्माण अभियानलाई यो निर्वाचनको परिणामसँग तुलना गरेर हेर्दा कहाँ पाउनुहुन्छ ?
यसपालीको निर्वाचन परिणाम हामीले सोचेभन्दा धेरै फरक त होइन, तर हाम्रा लागि अलि अनपेक्षित रह्यो । निर्वाचनअगाडि जसरी समाज ध्रुवीकरण भयो, विशेषगरी दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यका साथ गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे । यसको प्रतिध्रुवको रुपमा कांग्रेस र राप्रपाबीचमा गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धनले कम्युनिष्टहरुले जितेर आए भने देश भयंकर ठूलो अधिनायकवादतिर जान्छ, त्यसैले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु एकभएर कम्युनिष्टविरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने प्रचार अगाडि लगे । कम्युनिष्टहरुले स्थिरता र दुई तिहाईको नारा दिए, अर्को ध्रुवले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज जोडदाररुपमा उठायो । यसरी चर्को ध्रुवीकरणबीच यसपालीको चुनाव दुई ध्रुवीयजस्तो भयो । यसले गर्दा वैकल्पिक शक्तिहरुले पर्याप्तरुपमा जनताको ध्यान तान्न सकेनन् भन्ने लाग्छ ।
निर्वाचन परिणाम हेर्दा अब अर्को वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुव असम्भव बन्दै गएको हो ?
वैकल्पिक राजनीतिमा लाग्दा सुरुदेखिकै मेरो बुझाई राजनीतिमा आधारभूत सैद्धान्तिक स्पेश हुन्छ । नेपालमो यस्तो वैचारिक स्पेश पाँच किसिमको छ भन्ने मेरो बुझाई हो । त्यो पाँचवटा मध्ये एउटा टिकेर हामीले निरन्तर राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्छ । तब मात्र जनताले हामीलाई पत्याउँछन् । कांग्रेसको धारलाई म लिवरल डेमोक्रेटिक धार भन्ने गर्दछु । यो एउटा धार हो नेपाली राजनीतिको । छिरोलिएको कम्युनिष्टहरुको धार यसपालीदेखि एमाले, माओवादी केन्द्र र मसाल मिलेर अर्को ध्रुव बन्दैछ । यही ध्रुवमा अन्य साना कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि छन् । त्यस्तै कन्जरभेटिभहरुको अर्को पोल छ, जसको नेतृत्व राप्रपाले गर्दछ । उनीहरु फुटे र उनीहरुको पनि बेहाल भयो । उनीहरु नफुटी चुनावमा गएको भए अहिलेको जस्तो नहुन सक्थ्यो । चौथो, पहिचानमा आधारित राजनीति गर्नेहरुको धार, यसको नेतृत्व नेपालमा राजपा र फोरमले गरेका छन् । उनीहरु पनि चुनावमा मिलेर गए । यसो गर्दा उनीहरुको ठिक्कैको उपस्थिति संघीय संसदमा पनि भयो र प्रदेशमा त उनीहरुले बहुमत नै हासिल गरे । प्रादेशिक सरकार नै गठन गर्ने स्थिति देखिन्छ । हामी चाहिँ पाँचौं ध्रुव हौं, त्यो पनि वैकल्पिक ध्रुव हो । त्यो भनेको नेपालमा वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको ध्रुव हो । यो कुरालाई हामीले यो छोटो अवधिमा बुझाउन सकेनौं । वैकल्पिक भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्दैमा वैकल्पिक हुने होइन । तर, नयाँ आउनेजति सबै वैकल्पिक भन्ने बुझाई पनि बन्यो । वैकल्पिक शक्तिको पनि एउटा वैचारिक स्पेश हुन्छ । समयलगायतका कारण यो कुरा बुझाउन सकिएन ।
यहाँले वाम लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो । तर, यहाँ त कि वाम हुन्छ, कि लोकतान्त्रिक, कहाँ दुवै एकचोटि हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् नि !
यो चाहिँ एकदमै शास्त्रीय चिन्तनबाट ग्रस्त भएका मानिसहरुको बुझाई हो । सानो उदाहरण भनौं, कि गाई मात्रै भएको सिक्का हुन्छ, कि त्रिशुल मात्रै भएको सिक्का हुन्छ भनेर एउटा पूर्ण सिक्का बन्छ र ? कुनै पनि एउटा अस्तित्व निर्माण हुनको लागि त्यहाँ त दुई पक्ष हुनैपर्दछ । लेनिनको, माओको भनेर चिनिने हिजोको साम्यवाद आजको युगमा काम लाग्छ र ? नेपालका कुनै कम्युनिष्टले आँट गरेर यहाँ रुस, क्युबा, उत्तर कोरिया वा चिनको जस्तो साम्यवाद ल्याउँछौं भनेर भन्न सक्छन् ? अनि कसरी वामको मात्रै कुरा हुन्छ ? अनि प्रजातान्त्रिक भन्नेहरुले संसदीय लोकतन्त्र र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मात्रै पक्षधर हो भने भन्न सक्छन् ? यो खालको वैचारिक बहस त आजभन्दा ५०/६० वर्ष अगाडि नै सक्किइसक्यो । मलाई दुःख लाग्छ, नेपालमा अझै पनि यस्ता तर्क गर्नेहरुलाई बुद्धिजिवी भनिन्छ । अहिले त्यो युग नै बाँकी छैन । अहिले संसारमा हिजोका वाम वा कम्युनिष्ट भन्नेहरु पनि कम्युनिष्ट होइनन् ।
प्रजातान्त्रिक भन्नेहरु पनि प्रजातान्त्रिक होइनन् । उनीहरुको कम्युनिज्ममा पनि एउटा गत्यावरोध देखिइसक्यो भने हिजो प्रजातान्त्रिक भन्नेहरुको प्रजातन्त्रमा पनि एउटा गत्यावरोध देखिइसक्यो । त्यसैले आर्थिक प्रणाली र राजनीतिक प्रणाली दुवैमा हामीले एउटा नयाँ संश्लेषण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर नै वाम लोकतान्त्रिक भनिएको हो ।
यही कुरा तपाईंहरुले दुई वर्षदेखि गर्दै आउनुभयो । चुनावमा जाँदा त जनताले अनुमोदन त गरेनन् ?
म प्रष्टसँग यो कुरा स्वीकार्छु । हामीले दुईटा गल्ती गर्यौं वा हामीले गरेका कामहरुले जनतामा राम्रो छाप परेन । एउटा, कुनैबेला फोरमसँग मिल्यो नयाँ शक्ति भन्ने कुरा आयो । त्यो गल्ती थियो अथवा त्यसले हाम्रो इमेज बिगार्यो । यो त पहिचानमा आधारित राजनीति गर्ने पार्टी पो हो कि भन्ने अथवा मधेसी दलसँग गएर मिसिने पार्टी हो कि भन्ने भ्रम पर्यो । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा । अर्को गल्ती वामगठबन्धनमा गएर निस्कियौं । त्यहाँ जानु र निस्किनुका व्यवहारिक बाध्यताहरु आफ्नै ठाउँमा छन् । तर, बाहिर जनतामा के पर्यो भने यिनीहरु जुनसुकै कम्युनिष्ट पार्टीमा जान्छन्, वामलोकतन्त्र भनेको यिनीहरुको गफ मात्रै हो । अब यिनीहरुलाई छुट्टै पार्टी मानेर किन भोट दिनु पर्‍यो र ? भन्ने पर्‍यो । यी दुई गल्ती वा यी घटनाक्रमले पैदा गरेको छाप राम्रो रहेन । चुनावी नतिजा यसबाट प्रभावित छ ।
थोरै, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुकै कुरा गरौं न । नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर गठन भएका पार्टी । तर, नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको गाली गलौज हेर्दा कस्तो संस्कार बनाउने भए भन्ने लाग्दैन ?
विवेकशील साझाका साथीहरुको बारेमा आजको दिनमा आएर म कुनै पनि कमेन्ट गर्न चाहन्छ । उहाँहरु एउटा सन्दर्भबाट एउटाखालको वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गरिरहनुभएको छ । देशमा आज बोल्नका लागि अरु धेरै मुद्दाहरु छन् । ठूला पार्टीहरुले गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दा छन्, सिन्डीकेटालिज्म छ । देशमा गरिबी कति बढिरहेको छ भन्ने हिजो मात्र एउटा रिपोर्ट आयो । २६ हजारलाई वार्षिक आय मान्दा पनि ३८ प्रतिशत गरिबी भनेपछि महंगीलाई आधार मान्दा त ६०/७० प्रतिशत गरिबी छ । भ्रष्टाचार त्यत्तिकै छ । यी यावत मुद्दाहरुको बीचमा यसपाली राष्ट्रिय पार्टी बन्ने नसकेको र बन्दै गरेको दलको बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्ने देख्दिनँ । उहाँहरुले एउटा अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले के नतिजा दिन्न भन्ने कुरा हामीले पर्खेर हेर्ने हो । राम्रा कुराहरुमा सहकार्य गर्ने हो । नराम्रो कुराहरुको आलोचना गर्ने हो ।
नयाँ शक्तिकै कुरा गर्दा, स्थापनाकालको तामझाम टिक्न नसक्नुमा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता जनतामा अनुभूत नभएर होइन कि वैकल्पिक राजनीति गर्छौं भन्ने हामीहरुले वैकल्पिक पाराको ढंग नपुर्‍याएर माहौल बिग्रिएको हो जस्तो लाग्छ ।
यहाँहरुको पार्टी नेतृत्व एउटा टावर पर्सनालिटी हुनुहुन्छ । यो व्यक्तित्वको प्रभाव पार्टीमा कस्तो पर्दोरहेछ ? व्यक्ति हेरेरै पार्टीमा लाग्ने पनि होलान् । पार्टीबाट व्यक्तिभन्दा व्यक्तिबाट पार्टी चलेजस्तो पनि होला ? निर्णयहरुमा स्वामित्व लिनसक्ने अवस्था रहे कि रहेनन् ?
यो सवालमा केही समस्याहरु रहे । हामी धेरै संस्थागत हुनसकेनौं । पार्टी स्थापना भयो । केही मानिसहरु आए । पदको बार्गेनिङ गरे । फेरि, भाग्न थाले । पुरानै संस्कार र संस्कृतिका बोकेका मानिसहरुको ठूलो जमघट भयो । उहाँहरुको अपेक्षा र वैकल्पिक राजनीतिको मूल्य मान्यताहरु टक्राए । तत्काल चुनावहरु आए । स्थानीय चुनाव पनि तीन चरणमा भयो । प्रदेश र केन्द्रको चुनावहरु पनि आए । जन्मिँदै गरेको पार्टी यो परिणामको भागदौडको जटिलता, बारम्बार चुनाव आदिजस्ता अप्ठेराहरुको बीचमा हामीले पार्टीलाई संस्थागत गर्न नसकेकै हो ।
दुई वर्ष पार्टीमा बसेर वैकल्पिक राजनीतिको गफ दिनेहरु छाडेर जानासाथ सकेजति गाली गर्न थाले । इनपुटभन्दा आउटपुट झन पिछडिएको जस्तो । यसरी हेर्दा त यहाँ त कुनै प्रभावकारी संस्था नै बनेन कि जस्तो लाग्दैन ?
हाम्रोमा समाज र संस्कार नै यस्तै छ । अरु पार्टीको पनि हेर्नुस्, एमाले छाड्यो भने छाड्नासाथ एमालेलाई नै सत्तोसराप गर्ने । कांग्रेस छाड्नेले पनि छोडेको भोलिपल्ट कांग्रेसलाई नै सबैभन्दा धेरै गाली गर्छ । अरु पार्टीहरुमा यस्तै । यो नेपालीको आम संस्कार हो । नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी भर्खरै बन्दै थियो । त्यो पार्टीले के चाहिँ बिगारिदियो त्यति ठूलो र यतिधेरै विरोध गरेर हिड्नुपर्ने ? यसले दिइहाल्नुपर्ने कुनै मन्त्री पद पनि थिएन । सशस्त्र युद्धमा होमिएर बलिदानमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको पनि थिएन । ठूलै योगदान गर्नुपरेकोले यहाँ लागेर आर्थिक र पारिवारिक क्षति भएको पनि थिएन । नयाँ शक्तिले व्यक्तिहरुको के बिगारिदिएको थियो, जसले छाड्नासाथ यतिधेरै गाली गर्छन् ।
भनेपछि, दुई वर्षसम्म त केही सिकाउन सकेनछ त नयाँ शक्तिले ?
बन्दै गरेको पार्टी, बारम्बार चुनाव आयो । स्कूलिङ्ग पनि राम्रो भएन होला । डेढ वर्षमा सबै ठिकठाक पार्छौं भन्ने हाम्रो दावी थिएन । यो आन्दोलनले कम्तिमा एक दशक समय लिन्छ भनेर हामीले यसलाई सुरु गरेका हौं । कम्तिमा एक दशकको लागि धैर्यता राखेर आउनुस् भनेकै थियौं । तर, भागदौड त तीन महिनामै सुरु भयो । जो मानिस तीन महिनासम्म धैर्यता गर्न सक्दैन, उसले कस्तो वैकल्पिक पार्टी बनाउँछ होला ?
घोषणासभासम्म आउँदा त उभार नै देखिन्छ नयाँ शक्तिमा । तर, जसरी कुनै मापदण्डबिना टिका लगाउने र नेता बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो, वैकल्पिक भन्दा पनि शक्तिको खोजी धेरै भयो, त्यतैतिरबाट बिग्रियोजस्तो लाग्दैन ?
म स्वीकार्छु । प्रक्रियाहरुमा कहिँ न कहिँ त्रुटिहरु भएकै छन् । सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, लोकतन्त्रमा मान्छेलाई नआउ भन्न त मिल्दैन नि । पार्टीमा आउँछु भन्नेको पनि राजनीतिक अधिकार हुन्छ । तथापि ल्याउनेबित्तिकै मान्छेहरुलाई उनीहरुले भनेअनुसारकै पद दिइयो । क्षमता के हो, मनोवृत्ति के हो ? काम गर्छ कि गर्दैन ? यी सबै चिजको आंकलन गरिएन, यहाँ गल्ती भयो भन्ने मलाई लाग्छ ।
एकपटक पुराना पार्टीसँग तपाईंको पार्टीलाई तुलना गर्नुस् न । यो डेढ वर्षमा पुरानाले भन्दा वैकल्पिक हामीले यी यी काम गर्यौं भनेर सामान्य नागरिकले बुझ्ने गरी केही कुराहरु भन्न सक्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा डेढ वर्ष हाम्रो लागि पर्याप्त समय थिएन । दोस्रो कुरा, नयाँ शक्तिले ५ सको रुपमा जुन एजेन्डा उठायो, त्यो आज पनि सही छ । हामीले उठाएका एजेन्डा सम्झेर कहिँकतै पश्चात्ताप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण सकियो र संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गरेर अब आधारभूतरुपमा आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ । आर्थिक क्रान्तिको युगमा बस्दा हामीले सहभागितामुलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको लागि भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ । हामीले परम्परागत समाजवादको परिभाषा पनि बदल्नुपर्छ र यसको नयाँ ढाँचासहित नेपाली राजनीतिलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने विश्लेषण, भाष्य हामीले निर्माण गर्‍यौं । यी सबै ठीक हुन् । यसमा कतिपनि पश्चात्ताप छैन । तर, अरु अभ्यासहरुमा भने हामीले त्यति नयाँपन दिन सकेनौं । यसको लागि मैले कुनै दावी गर्ने भन्दा जनसमुदाय र नयाँ शक्तिका समर्थक शुभचिन्तकसँग क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । मलाई, आगामी दिन नेपालमा वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा नयाँ शक्तिलाई स्थापित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
अब नागरिकले पनि महसुस गर्नेगरी साँच्चै नयाँ र वैकल्पिक ढंगले यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुनै योजना छ ?
हामी दुई चार महिना आन्तरिक कामहरुमा लाग्छौं । हामीसँग जत्रो पार्टी छ, त्यसैलाई केन्द्रीकृत गर्दै बैठक, छलफल र समीक्षा गर्दै हामी कहाँनेर चुक्यौं ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै सुधारतिर लाग्छौं । यसैगरी वैकल्पिक शक्तिहरुबीचको वृहत एकता, वृहत ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दीको लागि प्रयास गर्छौं । यसैगरी, हामी तत्काल सरकारबारे बोल्दैनौं, निर्माण हुँदैछ । हनिमुन पिरियड पनि होला । त्यसपछि राज्यले गर्ने बेथितिविरुद्ध र जनसरोकारका मुद्दाहरुमा बलियोगरी प्रस्तुत हुने प्रयास गर्छौं । चौथो कुरा, अर्को चुनाव लक्षित गर्दै तत्काल रणनीति बनाउँदै लागू गरेर अगाडि बढ्छौं । पाँचौं कुरा आउँदो पाँच वर्षभित्र नेपालमा सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले वाम लोकतान्त्रिक र शक्तिका हिसाबले कम्तिमा तेस्रोदेखि पहिलो पार्टीसम्म बन्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्छौं । एउटा नयाँ पार्टी नेपालको संसदमा र राजनीतिक क्षितिजमा शासनदार ढंगले स्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ ।
यही तरिका, शैली र संगठनात्मक संरचनाले कि केही बदलाव पनि ल्याउनुहुन्छ ?
अहिलेकै तरिकाले यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैनौं । एउटै कुरालाई उही तरिकाले निरन्तरता दिए फरक परिणाम आउँदैन । सधैं हिडिराख्ने बाटोमा हिँडेर नयाँ गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । इनपुट परिवर्तन नगरी आउपुट परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हामी इनपुट पनि परिवर्तन गर्छौं । शैली फेर्छौं । विचारमा रहेका अस्पष्टता हटाउँछौं । आमरुपमा नागरिकलाई अपिल गर्छौं । करिब १० लाख मतदाता समानुपातिक प्रणालीभन्दा बाहिर छन् । यो समूहमा पनि पुग्छौं । अन्तरक्रियालाई व्यापक बनाउँछौं । वैकल्पिक भन्ने पार्टीहरुसँग पनि छलफल हुन्छ । यी सबै प्रक्रियाबाट एउटा नयाँ सिनर्जी पैदा हुन्छ ।
तर नयाँ शक्तिले बाटो भन्दा गन्तव्य नै फेरिदिने हो आशंका गर्नेहरु पनि छन् ?
हामीले विगतमा गरेका केही गल्तीहरुका कारण मानिसहरुले आशंका गर्नु स्वभाविकै हो । विगतका गल्तीहरु दोहोरियो भने नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी नै रहँदैन । म ढुक्क छु, आगामी दिनमा यी गल्तीहरु दोहोरिँदैनन् । नदोहोर्याउनको लागि विगतबाट सिक्दै मैले पनि सक्दो प्रयास गर्छु ।
विवेकशील साझा र नयाँ शक्तिका राम्रा नराम्रा दुवै पक्षहरु होलान् । एकजना वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले यी दुई पार्टीबीचको सहकार्य र संघर्षको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको शक्तिको स्पेश स्पष्ट देखिएको छ । यो कुरा दुवै पक्षले बुझ्नुपर्छ । हामीबीच ठूला विमतिहरु पनि छैनन् । सेन्टर लेफ्ट र लेफ्ट डेमोक्र्याट भन्नुमा दार्शनिक हिसाबले खासै भिन्नता देखिन्न । नयाँ शक्तिले समृद्धि सम्भव छ हाम्रो पालामा भन्ने नारा सुरुमै बनाएको सबैलाई थाहा छ । उहाँहरुले पनि समृद्धि गरेरै छाड्ने हो, हेरेरै मर्ने हो भन्ने नारा दिनुभएको छ । यसमा पनि भिन्नता छैन । त्यसैले विकास, समृद्धि र सुशासन युगमा हामी छौं, राजनीति त्यतै मोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि समानता छ । शासकीय स्वरुपमा पनि समानता छ । बाह्य र आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा पनि समानता नै देख्छु । यसर्थ, विचार, कार्यक्रम, नीति र एजेन्डामा मैले त्यत्ति भिन्नता देख्दिन । ९० देखि ९५ प्रतिशत समानता देख्छु, पाँच प्रतिशत फरक भनेको संसारमा जहाँ पनि हुन्छ ।
तर पनि दूरी त धेरै नै छ जस्तो देखिन्छ नेता कार्यकर्ताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा त ?
यो भनेको संगठनात्मक इगो हो । पार्टीहरु भिन्नाभिन्नै जन्मिएपछि आआफ्नै अहमहरु हुन्छन् । स्वतत्व हुन्छन्, संस्कार हुन्छन्, तिनीहरु टक्राउँछन् । यिनीहरुलाई टकराउन दिनुपर्छ । तपाईं हेर्नुस् न, कम्युनिष्टहरुमा के भयो ? हिजो मोहनविक्रम र प्रचण्डले एकअर्कालाई कति गाली गर्थे ? माओवादी र एमालेले एकअर्कालाई कति गाली गर्थे ? भौतिक हमलामा नै उत्रिएका देखेकै छौं । आज उनीहरु मिलेर हिँडिरहेका छन् । समय पनि आउनुपर्छ कतिपय सन्दर्भमा । भिन्न रहुन्जेल आफ्नो पार्टी ठूलो बनाउन नै प्रयास गर्ने हो । यो राजनीतिमा लाग्नुको न्यूनतम् नैतिकता हो । म जहिलेसम्म नयाँ शक्तिमा हुन्छु, यसलाई ठूलो र राम्रो बनाउन र यसको हितमा नै मेरो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुन्छ । यसको अर्थ, मैले अरुको अस्तत्विलाई निषेध गर्छु वा अरुलाई गाली गर्छु भन्ने होइन । एउटा खास समय आएपछि सबै कुराहरु मिल्छन् ।
सनीले उचाले पहिलो लोकस्तारको उपाधि
चारजना उफ्रेर लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन खोज्नु चाहिँ बेकारको कुरा होः मन्त्री बास्कोटा
… तब मात्र राजनीतिका यी नकारात्मक दुश्चक्रबाट निस्कन सम्भव हुनेछ
अन्तर्वार्ता, अर्थ / व्यापार, देश
‘विदेश जाँदा पनि जातिले पछ्याउन छाड्दैन’
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ- कतिपय मान्छेहरुको प्रवृत्ति म देखिरेको छु
विवाहको सिजनमा बजारमा सुनको अभाव हुने देखिन्छ
४० अर्बको सेवा दिने ग्रील उद्योगलाई उद्योग ग्रामभित्र स्थापना गर्नुपर्छ
ज्ञान र सिप भित्र्याउन एनआरएन विज्ञ सम्मेलन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ
‘ओलीले भन्नुभयो, अब गोविन्द केसीले फेरी अनसन बस्नुपर्दैन’
‘डा. भट्टराईको विचारलाई व्यवहारमा उतार्न नयाँ पुस्ता तयार हुनुपर्छ’